Aung La Nsang နိုင်ရင် ခိုးပြေးမယ်နော် – Alanzayar
Aung La Nsang နိုင်ရင် ခိုးပြေးမယ်နော်
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ဆိုတော့ မှတ်မိဦးမလားဟင်။ အတန်းဖော်တွေက မင်းကို အနိုင်ကျင့်ရင် ကိုယ်ပဲ ဒိုင်ခံရှင်းပေးရတယ်လေ။ မင်းပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အားရှိသွားတယ်။ “အရမ်းအားကိုးတာပဲ အစ်ကို” တဲ့။ နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးက ထွက်ကျလာတဲ့ “အစ်ကို” စကားလုံးလေးက ကိုယ့်ကို သူရဲကောင်းကြီးလို ခံစားရတယ်။ မင်းအတွက်ဆိုရင် ရန်သူတစ်ထောင်ကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။
မင်းက ပါးပေါ်မှာ စံပယ်တင်မှဲ့လေးနဲ့နော်။ ပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းလှတာပဲသိလား။ သနပ်ခါးလေးကို အမြဲလိမ်းထားတယ်။ လူကြီးမိဘတွေကိုလည်း ရိုသေတယ်။ အနေအထိုင်လည်း ပိရိတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။ မင်းကလည်း ကူညီတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို အားကိုးလွန်းတယ်နော်။”အစ်ကိုရောက်လာရင် အားရှိတယ်” တဲ့။ ဒီစကားလုံးတွေကြောင့် အစ်ကိုလည်း မင်းဘေးမှာ ဆက်ရှိနေတာပါ။
မင်းက ကရာတေးလည်း ကစားတယ်နော်။ အင်းလေ . . . အခုလို ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ခံပညာ သင်ထားရမှာပဲ။ အစ်ကိုလည်း အားကစားကို ဝါသနာပါတယ်။ “အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် အားကစားကို ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ အစ်ကိုတို့က အမြင်မတူဘူးနော်။
အစ်ကိုက Conor McGregor ကို သဘောကျပေမယ့် မင်းက Khabib Nurmagomedov ကို ကြိုက်သလိုပေါ့။ အစ်ကိုက Striking ကို သဘောကျတယ်။ မင်းက Control Control လုပ်တာကို နှစ်သက်တယ်။ အမြင်တူတာရှိတယ်။ အဲဒါက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာပဲ။
မင်းပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်ရင် ‌ပြောနေကျ စကားလေးကို မှတ်မိသေးတယ်။ “အရမ်းဆိုးတာပဲ” တဲ့။ ပြေးထွက်သွားမှာစိုးလို့ ဖက်ထားရင်လည်း “အရိုးတွေ ကျိုးကုန်တော့မယ်၊ သွားလူဆိုး” တဲ့။ မင်းက ကျက်သရေရှိရုံတင် မဟုတ်ဘူး။ ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်။
မိဘတွေက အစ်ကိုတို့ချစ်ခြင်းကို တားမြစ်တယ်။ ရှေးရိုးစွဲတဲ့ အမြင်တွေက အစ်ကိုတို့ချစ်ခြင်းကို မတားနိုင်ပါဘူး။ အစ်ကိုလည်း အဲဒါတွေကို ထည့်မတွက်ပါဘူး။ အစ်ကိုတို့ အတူနေဖြစ်ရင် မင်းရဲ့နဖူးလေးကို နမ်းမယ် . . ပါးလေးကို နမ်းမယ် . . ပြီးတော့ အဟွန့်။ “အရမ်းကြမ်းတာပဲ အစ်ကို” လို့ မပြောရဘူးနော်။
လူကြီးတွေ သဘောမတူဘူး၊ အစ်ကိုတို့တွေ ခိုးပြေးရအောင်။ Vitaly Bigdash ကို Aung La Nsang နိုင်ရင် ခိုးရာလိုက်မယ်တဲ့။ Aung La Nsang ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားက အစ်ကိုတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့ မင်း ယုံကြည်မှန်း ခံစားမိတယ်။ Aung La Nsang က သေချာပေါက်နိုင်မှာပါ။ သောကြာညမှာ အထုတ်ပြင်ထားနော်။ လမ်းထိပ်မှာ အစ်ကို စောင့်နေမယ်။ အရမ်းချစ်တယ် . . ညီ။
Aung La Nsang နိုငျရငျ ခိုးပွေးမယျနျော
ငယျငယျတုနျးက အဖွဈအပကျြဆိုတော့ မှတျမိဦးမလားဟငျ။ အတနျးဖျောတှကေ မငျးကို အနိုငျကငျြ့ရငျ ကိုယျပဲ ဒိုငျခံရှငျးပေးရတယျလေ။ မငျးပွောတဲ့ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ အားရှိသှားတယျ။ “အရမျးအားကိုးတာပဲ အဈကို” တဲ့။ နူးညံ့တဲ့ နှုတျခမျးပါးက ထှကျကလြာတဲ့ “အဈကို” စကားလုံးလေးက ကိုယျ့ကို သူရဲကောငျးကွီးလို ခံစားရတယျ။ မငျးအတှကျဆိုရငျ ရနျသူတဈထောငျကိုလညျး ရငျဆိုငျရဲတယျ။
မငျးက ပါးပျေါမှာ စံပယျတငျမှဲ့လေးနဲ့နျော။ ပွုံးလိုကျရငျ အရမျးလှတာပဲသိလား။ သနပျခါးလေးကို အမွဲလိမျးထားတယျ။ လူကွီးမိဘတှကေိုလညျး ရိုသတေယျ။ အနအေထိုငျလညျး ပိရိတယျ။ ဒါတှကေ ကိုယျသဘောကတြဲ့ အခကျြတှပေါပဲ။ မငျးကလညျး ကူညီတတျတဲ့ ကိုယျ့ကို အားကိုးလှနျးတယျနျော။”အဈကိုရောကျလာရငျ အားရှိတယျ” တဲ့။ ဒီစကားလုံးတှကွေောငျ့ အဈကိုလညျး မငျးဘေးမှာ ဆကျရှိနတောပါ။
မငျးက ကရာတေးလညျး ကစားတယျနျော။ အငျးလေ . . . အခုလို ခတျေပကျြကွီးထဲမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကာကှယျနိုငျဖို့ ကိုယျခံပညာ သငျထားရမှာပဲ။ အဈကိုလညျး အားကစားကို ဝါသနာပါတယျ။ “အသှငျမတူ အိမျသူမဖွဈ” ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပဲဖွဈမယျ။ ဒါပမေယျ့ အားကစားကို ရှုမွငျသုံးသပျတဲ့အခါမှာ အဈကိုတို့က အမွငျမတူဘူးနျော။
အဈကိုက Conor McGregor ကို သဘောကပြမေယျ့ မငျးက Khabib Nurmagomedov ကို ကွိုကျသလိုပေါ့။ အဈကိုက Striking ကို သဘောကတြယျ။ မငျးက Control Control လုပျတာကို နှဈသကျတယျ။ အမွငျတူတာရှိတယျ။ အဲဒါက တဈယောကျကိုတဈယောကျ အရမျးခဈြကွတယျဆိုတာပဲ။
မငျးပါးလေးကို ရှတျခနဲ နမျးလိုကျရငျ ‌ပွောနကြေ စကားလေးကို မှတျမိသေးတယျ။ “အရမျးဆိုးတာပဲ” တဲ့။ ပွေးထှကျသှားမှာစိုးလို့ ဖကျထားရငျလညျး “အရိုးတှေ ကြိုးကုနျတော့မယျ၊ သှားလူဆိုး” တဲ့။ မငျးက ကကျြသရရှေိရုံတငျ မဟုတျဘူး။ ခဈြစရာလညျးကောငျးတယျနျော။
မိဘတှကေ အဈကိုတို့ခဈြခွငျးကို တားမွဈတယျ။ ရှေးရိုးစှဲတဲ့ အမွငျတှကေ အဈကိုတို့ခဈြခွငျးကို မတားနိုငျပါဘူး။ အဈကိုလညျး အဲဒါတှကေို ထညျ့မတှကျပါဘူး။ အဈကိုတို့ အတူနဖွေဈရငျ မငျးရဲ့နဖူးလေးကို နမျးမယျ . . ပါးလေးကို နမျးမယျ . . ပွီးတော့ အဟှနျ့။ “အရမျးကွမျးတာပဲ အဈကို” လို့ မပွောရဘူးနျော။
လူကွီးတှေ သဘောမတူဘူး၊ အဈကိုတို့တှေ ခိုးပွေးရအောငျ။ Vitaly Bigdash ကို Aung La Nsang နိုငျရငျ ခိုးရာလိုကျမယျတဲ့။ Aung La Nsang ရဲ့ စိတျဓာတျခှနျအားက အဈကိုတို့ရဲ့ အခဈြရေးကို အထောကျအပံ့ဖွဈစမေယျလို့ မငျး ယုံကွညျမှနျး ခံစားမိတယျ။ Aung La Nsang က သခြောပေါကျနိုငျမှာပါ။ သောကွာညမှာ အထုတျပွငျထားနျော။ လမျးထိပျမှာ အဈကို စောငျ့နမေယျ။ အရမျးခဈြတယျ . . ညီ။crd
ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder
မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ပွဲရှိတဲ့ မာတင်ငုယင်…
Previous Article ရိုင်နီယာ နဲ့ အဘာဆော့တို့ရဲ့ ပွဲအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်
Next Article ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့အတွက် ဆရာဇင်ယော်နီဟောကြားထားသော ၇ ရက်သားသမီး ဗေဒင်